Iingcebiso ezi-5 eziphezulu zoPhando lwaBukhulu | Martech Zone
Iingcebiso ezi-5 eziphezulu zoPhando lwaBukhulu
NgoMvulo, Aprili 23, 2012 NgoMvulo, nge-22 kaJanuwari, 2018 UHanna Johnson
Kukho inyani elula eboniswe lixesha le-Intanethi: Ukucela ingxelo kunye nokufumana ukuqonda kubathengi bakho kunye nemarike ekujolise kuyo kulula. Oku kunokuba yinyani emangalisayo okanye into eyoyikisayo, kuxhomekeke ekubeni ungubani kwaye ujonge ntoni malunga nempendulo, kodwa ukuba ukwimakethi ukunxibelelana nesiseko sakho ukufumana uluvo lwabo olunyanisekileyo, uneetoni simahla kunye neendleko onokukhetha kuzo. Kukho naliphi na inani leendlela onokwenza ngazo, kodwa ndiyasebenza SurveyMonkey, ke indawo yam yobungcali, ngokwendalo, ukudala uphando olwenziwa kwi-Intanethi olunika iziphumo ezicacileyo, ezinokuthenjwa, ezinokusetyenziswa.
Sithatha imishini yethu yokukunceda ukuba uthathe ezona zigqibo zibalulekileyo, nokuba uzama ukuthatha isigqibo sokuba ngowuphi umfanekiso oza kuwusebenzisa kwiphepha elingaphandle, yeyiphi imveliso ephuculweyo ekufuneka ubeke phambili, okanye zeziphi izibheno eziza kusebenza kwitheko lakho lokwazisa. Kodwa uza kuthini ukuba awuzange wenze uphando olukwi-Intanethi, okanye udideke zizo zonke izinto ezintle (tsiba ingqiqo? Ngaba olu luhlobo lwedutch ephindwe kabini?)
Ndiza kugcina ubunzima beempawu zethu zophando ngelinye ixesha (nangona ndingakuxelela ngokukhuselekileyo, Tsiba uLogic ayinanto yakwenza neentambo zokutsiba). Kodwa ndiza kwabelana nawe ngezi ngcebiso zangaphakathi zintlanu zenza uvavanyo olukhulu kwi-Intanethi.
1. Chaza ngokucacileyo injongo yeSaveyi yakho ekwi-Intanethi
Awunakuqalisa umkhankaso wentengiso ngaphandle kokucacisa iinjongo zeli phulo (yandisa ulwazi malunga nophawu lwentengiso, ukuqhuba ukuguqulwa, ukujongela phantsi abo ukhuphisana nabo, njl.njl. Iinjongo ezingacacanga zikhokelela kwiziphumo ezingacacanga, kwaye yonke injongo yokuthumela isaveyi ekwi-intanethi kukufumana iziphumo eziqondakala ngokulula kwaye zithathelwe ingqalelo. Iisaveyi ezilungileyo zinenjongo enye okanye ezimbini ekugxilwe kuzo ekulula ukuziqonda kwaye zicacisele abanye (ukuba ungazicacisa ngokulula ku-8th grader, ukwindlela elungileyo). Chitha ixesha phambi kokuchonga, ngokubhala:
Kutheni usenza olu vavanyo (yintoni injongo yakho)?
Ngaba unethemba lokuba olu phando luza kukunceda ntoni?
Zeziphi izigqibo onethemba lokuzichaphazela neziphumo zolu phononongo, kwaye zeziphi iindlela eziphambili zedatha oya kuyidinga ukuze ufike apho?
Izandi zicacile, kodwa silubonile uphando oluninzi apho imizuzu embalwa yocwangciso ibinokwenza umahluko phakathi kokufumana iimpendulo ezisemgangathweni (iimpendulo eziluncedo nezisetyenziswayo) okanye idatha engenakutolikwa. Ukuthatha imizuzu embalwa eyongezelelweyo kwisiphelo sophando lwakho kuya kunceda ekuqinisekiseni ukuba ubuza imibuzo efanelekileyo ukuhlangabezana nenjongo kunye nokuvelisa idatha eluncedo (kwaye iya kukugcinela ixesha kunye nentloko ebuhlungu).
2. Gcina uSaveyi ngokuMfutshane kwaye ujolise
Njengoninzi lweendlela zonxibelelwano, uphando lwakho olukwi-Intanethi lubhetele xa lufutshane, lumnandi, kwaye luye kwinqanaba. Mfutshane kwaye kugxilwe kunceda kumgangatho kunye nobungakanani bempendulo. Ngokuqhelekileyo kungcono ukujolisa kwinjongo enye kunokuba uzame ukwenza isaveyi eyintloko egubungela iinjongo ezininzi.
Uphando olufutshane ngokubanzi lunamazinga aphezulu okuphendula kunye nokushiyeka okuncinci phakathi kwabaphenduli bophando. Yindalo yomntu ukufuna ukuba izinto zikhawuleze kwaye kube lula-nje ukuba umntu othatha uphando aphulukane nomdla, bayayeka umsebenzi-bakushiye nomsebenzi onzima wokutolika loo seti yedatha (okanye uthathe isigqibo sokuyilahla kunye).
Qiniseka ukuba imibuzo yakho ijolise ekuncedeni ukufezekisa injongo yakho echaziweyo (awunayo? Buyela inyathelo 1). Sukuphosa imibuzo 'emnandi ukuba nayo' enganiki ngqo idatha yokukunceda uhlangane neenjongo zakho.
Ukuze uqiniseke ukuba uphando lwakho lufutshane ngokufanelekileyo, ixesha elinabantu abambalwa ngelixa belithatha. Uphando lweMonkey (kunye neGallup kunye nabanye) lubonakalisile ukuba uphando kufuneka luthathe imizuzu emi-5 okanye ngaphantsi ukuyigqiba. Imizuzu emi-6 ukuya kweli-10 yamkelekile kodwa sibona amaqondo abalulekileyo okushiya kwenzeka emva kwemizuzu eli-11.
3. Gcina Imibuzo Ilula
Qiniseka ukuba imibuzo yakho ifikelela kwinqanaba kwaye uphephe ukusetyenziswa kwejoggon ekhethekileyo yomzi-mveliso. Sisoloko sifumana uphando ngemibuzo ecaleni kwendlela: “Ugqibele nini ukusebenzisa eyethu (Faka icandelo lezobugcisa kwi-mumbo jumbo apha)? "
Ungacingi ukuba abo bathatha uphando bakho banelisekile ngama-acronyms kunye ne-lingo njengoko unjalo. Yichazele yona (khumbula ukuba i-8th Uhleli kwiinjongo zakho? Funa ingxelo yabo-yokwenyani okanye ecingelweyo- ngeli nyathelo).
Zama ukwenza imibuzo yakho icace gca kwaye ingqale ngqo. Thelekisa: Yintoni amava akho ebesebenza neqela lethu le-HR? Ku: Waneliseke kangakanani lixesha lokuphendula leqela lethu le-HR?
Sebenzisa imibuzo eValiweyo eValiweyo nanini na kunokwenzeka
Imibuzo evaliweyo evaliweyo inika abaphenduli ukhetho oluthile (umz. Ewe okanye Hayi), okwenza ukuba uhlalutyo lwakho lusebenze lula. Imibuzo evaliweyo iphela inokuthatha u-ewe / hayi, ukhetho oluninzi, okanye inqanaba lokulinganisa. Imibuzo evulekileyo evulekileyo evumela abantu ukuba baphendule umbuzo ngamazwi abo. Imibuzo evulelekileyo ilungile ukongeza idatha yakho kwaye inokubonelela ngolwazi olusemgangathweni kunye nokuqonda. Kodwa ngokudibana kunye nohlalutyo, imibuzo evaliweyo kunzima ukuyibetha.
5. Gcina iMilinganiselo yeSikali seMilinganiselo eVumelana neSaveyi
Izikali zokulinganisa ziyindlela elungileyo yokulinganisa kunye nokuthelekisa iiseti zezinto eziguquguqukayo. Ukuba ukhetha ukusebenzisa izikali zokulinganisa (umz. Ukusuka ku-1 ukuya ku-5) qiniseka ukuba uzigcina zingaguquguquki kulo lonke olu vavanyo. Sebenzisa inani elifanayo lamanqaku kwisikali (okanye ngcono okwangoku, sebenzisa amagama achazayo), kwaye uqiniseke ngeentsingiselo zokuhlala okuphezulu kunye nokuhlala okuphantsi kuhambelana kuphando. Kwakhona, kuyanceda ukusebenzisa inani elingaqhelekanga kwisikali sakho sokulinganisa ukwenza uhlalutyo lwedatha lula. Ukutshintsha izikali zakho zokulinganisa kuya kubaphazamisa abo bathatha uphando, okuya kuthi kukhokelele kwiimpendulo ezingathembekanga.
Yiyo loo nto yeengcebiso eziphezulu ezi-5 zobukhulu besaveyi, kodwa kukho itoni yezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni xa usenza uphando lwakho kwi-Intanethi. Jonga kwakhona apha ukuze ufumane ezinye iingcebiso, okanye ujonge ibhlog yethu yeSurveyMonkey!
tags: umbuzo ophelileyo wophandoimibuzo yophando evulekileyoizikali zokulinganisatsiba ingqiqouyilo lophandoubude bophandoinjongo yophandoimibuzo yophandoiingcebiso zesaveyiSurveyMonkeyZophandozoomerang
Sukuyibheja yonke kwiQhinga le-Organic
Epreli 24, 2012 ngo-2: 04 PM
“Qiniseka ukuba umbuzo ngamnye ugxile ekuncedeni ufezekise injongo yakho”
Inqaku elikhulu. Awufuni ukuchitha ixesha labantu ngemibuzo engeyiyo yobuthunywa. Ixesha lomthengi lixabisekile, musa ukulichitha kwimibuzo engenamsebenzi!